Volcano ka Qarxay Buur Gobolka Qoraxay kutaala iyo dhul Gariir laga dareemay deegaamo Jarar katirsan. | ogaden24
Volcano ka Qarxay Buur Gobolka Qoraxay kutaala iyo dhul Gariir laga dareemay deegaamo Jarar katirsan.
Wararka naga soo Gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya in Habeen Hore Daryaanka Qarax aad u wayn oo wata Holac laga maqlay lagana arkay meelo kamida Gobolka Qoraxay ee wadanka Ogadenia.
Qaraxa oo kadhacay Buur lagu magacaabo Jiic ayaa Daryankiisa iyo Holaca kabaxay waxaa lagu sheegay Volcano waxaana warku sheegayaa in cabsi xoogan iyo argagax uu Qaraxaasi ku beeray dadkii Ag-dhowaa Aaga Buurta, taasi oo keentay in isla Habeen Hore ay dadkii Xoola dhaqatada ahaa ee Aagaasi daganaa cabsi darteed Xoolahooda laqaxaan.
Lama soo sheegin wax khasaare ah oo kadhashay waxa loogu Yeedhay Volcanaha ee ka Qarxay Buurta Jiica oo katirsan Gobolka Qoraxay, waxayna noqonaysaa markii ugu Horay ee Qaraxan noocan ah uu kadhasho Buuraha Ogadenia kuyaala.
Dhinaca kale war aanu kahelay magaalada Dhagaxbuur ayaa isna waxaa uu sheegayaa in isla Habeen Hore Dhul Gariir laga dareemay meelo kamida Gobolka Jarar gaar ahaan degmada Dhagaxbuur.
Sida warka aanu kuhelay dhul Gariirka si Toos ah loogama dareemin magaalada balse deegaamo dhawr ah oo kabaxsan magaalada Dhagaxbuur, ayaa si iskumid ah looga dareemay Dhul Gariirka kaasi oo dad deegaamo kala durugsan kusugnaa ay wada xaqiijiyeen.
Lama xaqiijin karo in Vocanaha Ka Qarxay Buurta Jiic iyo dhul Gariirka laga dareemay meelaha kamid ah degmada Dhagaxbuur ay xidhiidh leeyihiin, balse dhul Gariirka ayaa inta badan laga dareemi jiray meelo kamida Gobolka Faafan gaar ahaan deegaaamada xadka dhinaca Somaaliya iyo magaalada Jigjiga oo uusan ku badnayn.
Labadani dhacdo ee isku Habaynka kadhacay Gobolada dariska ah ee Qoraxay iyo Jarar ayaa laga Hadalhayaa magaloyinka waawayn ee wadanka Ogadenia, waana arin ku cusub inta badan bulshada ree Ogadenia oo haatan siwayn uga walaacsan una arka masiibo ay tahay in laga Alle Baryo.